राजधानी बासीलाई घर बाहिर ननिस्कन जिल्ला प्रशासनको आग्रह, यस्तो छ कारण! बिज्ञप्तिमा हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > राजधानी बासीलाई घर बाहिर ननिस्कन जिल्ला प्रशासनको आग्रह, यस्तो छ कारण! बिज्ञप्तिमा हेर्नुस्
राजधानी बासीलाई घर बाहिर ननिस्कन जिल्ला प्रशासनको आग्रह, यस्तो छ कारण! बिज्ञप्तिमा हेर्नुस्
admin March 5, 2020 समाचार	0
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागी काठमाण्डौ वासीलाई अत्यावश्यक काम बाहेक सरकारले बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । काठमाण्डौ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले कोरोना संक्रमणको खतरालाई ध्यान दिँदै अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि काठमाण्डुका बासिन्दालाई अत्यावश्यक काम परेका बेलाबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालीहरूका लागि आयो यस्तो खुशीकाे खबरः को`रोनाभाइर`सको ज`डीबुटी औ`षधी यस्तो! हेर्नुस्
यी दुई नन्द भाउजु: भाउजुले ३ महिने शिशु छाडेर दुबै एक जनासँग टाप! शिशुको यस्तो बिजोग!